Amboary ny ezaka ataonao amin'ny varotra 2022 miaraka amin'ny fitantanana ny fanekena | Martech Zone
Alatsinainy Janoary 10, 2022 Alatsinainy Janoary 10, 2022 Eric Tejeda
Ny taona 2021 dia tsy nampoizina toy ny 2020, satria maro ny olana vaovao manakorontana ny mpivarotra varotra. Ny mpivarotra dia mila mijanona ho kinga sy mamaly ireo fanamby taloha sy vaovao ary miezaka manao bebe kokoa amin'ny kely kokoa.
Ny COVID-19 dia nanova tsy azo ihodivirana ny fomba fijerin'ny olona sy ny fiantsenana - ampio ankehitriny ny hery mitambatra amin'ny variana Omicron, ny fikorontanan'ny rojo famatsiana ary ny fiovaovan'ny fihetseham-pon'ny mpanjifa amin'ny piozila efa sarotra. Ireo mpaninjara mitady haka ny fitakiana miorim-paka dia mampifanaraka amin'ny alàlan'ny fanovana ny fotoanan'ny fampielezan-kevitr'izy ireo amin'ny varotra, fampihenana ny teti-bolan'ny doka noho ny fanamby amin'ny famatsiana, miala amin'ny famoronana manokana momba ny vokatra ary mandray feo “tsy miandany nefa manantena”.
Na izany aza, alohan'ny hieritreretan'ny mpivarotra momba ny fanosehana ny fandefasana amin'ny mailaka na ny fanentanana lahatsoratra manaraka, dia mila mahazo antoka izy ireo fa manaraka ny fomba fanao tsara indrindra amin'ny fifandraisana amin'ny mpanjifa sy ny fitsipiky ny fitantanana ny fanekena.
Inona no atao hoe Fitantanana ny fanekena?
Ny fitantanana ny faneken-keloka dia ny fomba ampiasaina hanamarihana ny fomba fanangonam-panekena ho azy, manamora ny fananganana fitokisana, mandrisika ny mpanjifa hifidy sy hihazona ny fanarahan-dalàna amin'ny fepetra takian'izy ireo.
Nahoana no zava-dehibe ny fitantanana ny fanekena?
A sehatra fitantanana ny fanekena (VIT) dia fitaovana iray miantoka ny fankatoavan'ny orinasa ny fitsipika momba ny faneken'ny fifandraisana, toy ny GDPR ary TCPA. Ny CMP dia fitaovana azon'ny orinasa na mpamoaka ampiasaina hanangonana ny faneken'ny mpanjifa. Manampy amin'ny fitantanana ny angon-drakitra sy fizarana izany amin'ny mpanome tolotra lahatsoratra sy mailaka. Ho an'ny tranokala misy mpitsidika an'arivony isan'andro na orinasa mandefa mailaka na hafatra an-tsoratra an'aliny isam-bolana, ny fampiasana ny CMP dia manamora ny fanangonana ny fanekena amin'ny alàlan'ny automatique ny dingana. Izany no mahatonga azy io ho fomba mahomby kokoa sy tsy misy vidiny mba hijanonana ho fanarahan-dalàna ary manampy amin'ny fisokafan'ny zotram-pifandraisana.
Tena zava-dehibe ny fiaraha-miasan'ny mpivarotra miaraka amin'ireo mpiara-miombon'antoka azo itokisana izay manampahaizana manokana amin'ny vahaolana amin'ny fitantanana ny fanekena, indrindra amin'ny fananganana sy fampiasana sehatra iray izay mandinika ny lalànan'ny fahefana rehetra mifandraika amin'izany, anisan'izany i Etazonia, Kanada, EU sy ny maro hafa. Ny fananana rafitra toy izany dia mampihena ny mety ho fandikana ny lalàna momba ny angon-drakitra any amin'ny firenena na faritra misy ny orinasanao sy ny mpanjifa. Ny sehatra avo lenta ankehitriny dia natsangana tamin'ny fanarahan-dalàna, miantoka fa rehefa miova sy mivoatra ny fitsipika, dia toy izany koa ny fanarahan-dalàna amin'ny fitantanana ny fanekena.
Zava-dehibe ihany koa ny fitantanana ny fanekena araka ny tokony ho izy noho ny fivoarana lavitry ny fampiasana angon-drakitra cookie an'ny antoko fahatelo sy amin'ny fanangonana angon-drakitra avy amin'ny antoko voalohany mivantana avy amin'ny mpanjifa.
Miala amin'ny angona avy amin'ny antoko fahatelo
Efa elaela izay no nisy ady nifanaovana momba ny zon'ny olona iray amin'ny tsiambaratelon'ny angon-drakitra. Fanampin'izay, misy ny paradox momba ny fiainana manokana/fananana manokana. Midika izany fa maniry ny tsiambaratelon'ny angon-drakitra ny mpanjifa ary mahafantatra fa azo antoka ny angon-dry zareo. Na izany aza, amin'izany fotoana izany, miaina ao anatin'ny tontolo nomerika isika ary ny ankamaroan'ny olona dia mahatsapa ho tototry ny hafatra rehetra tonga amin'izy ireo isan'andro. Noho izany, tian'izy ireo koa ny hafatra ho an'ny tena manokana sy mifanaraka ary manantena fa hanome traikefa mpanjifa lehibe ho azy ireo ny orinasa.
Vokatr'izany dia nisy fiovana lehibe teo amin'ny fomba fanangonana sy fampiasana ny angona manokana ny orinasa. Ny orinasa sy ny mpivarotra ankehitriny dia mifantoka amin'ny fandraisana ny fanangonana ny angon'ny antoko voalohany. Ity endrika angon-drakitra ity dia fampahalalam-baovao zarain'ny mpanjifa an-kalalahana sy iniana amin'ny marika atokisany. Mety ahitana hevi-baovao manokana toy ny safidinao, tamberina, fampahafantarana momba ny mombamomba azy, mahaliana, fanekena, ary fikasana hividy.
Satria ny orinasa dia mitazona fihetsika mangarahara momba ny antony hanangonan'izy ireo an'io karazana angon-drakitra io ary hanome lanja ny mpanjifa ho tambin'ny fizarana ny angonany, dia mahazo fahatokisana bebe kokoa avy amin'ny mpanjifany izy ireo. Izany dia mampitombo ny fahavononan'izy ireo hizara angon-drakitra bebe kokoa ary hifidy amin'ny fandraisana fifandraisana mifandraika amin'ny marika.
Ny fomba iray hafa hampitomboan'ny orinasa ny fahatokisana ny mpanjifa dia ny fitazonana azy ireo amin'ny fanavaozana ny famatsiana sy ny fitahirizana ny vokatra mahaliana azy ireo hiantsena. Ity fifanakalozan-kevitra mangarahara momba ny fanavaozam-baovao momba ny fandefasana ity dia manampy amin'ny fitantanana ny andrasana araka ny tokony ho izy amin'ny fanaterana, na koa ny fahatarana amin'ny fandefasana.
Fanomanana ny fahombiazana ara-barotra 2022
Ny fifantohana amin'ireo paikady ireo dia zava-dehibe tsy amin'ny fitantanana ny tsingerin'ny fiantsenana matetika, fa amin'ny drafitra ho an'ny hetsika ara-barotra 2022 sy ny fanitarana mar-tech ihany koa. Ny telovolana fahefatra dia matetika ny fotoana ihaonan'ny marika amin'ny ekipan'ny varotra mba hahazoana antoka fa mandeha ny fifandraisana ary hamantatra ny paikady ho an'ny taona ho avy hanatsarana ny traikefan'ny mpanjifa amin'ny ankapobeny, hampitombo ny fidiram-bola ary hitazonana ny fifandraisana misokatra.
Amin'ny fandraisana ireo dingana ireo, ianao sy ny marikao dia azo antoka fa ho dingana iray mialoha ny fifaninanana amin'ny fiandohan'ny taona 2022!
Raha mila fanazavana fanampiny momba ny PossibleNOW's sehatra fitantanana ny fanekena:
Mangataha Demo PossibleNOW
Tags: Cmpfitantanana fanekenasehatra fitantanana ny fanekenarindrambaiko fitantanana fanekenafiainana manokana an'ny mpanjifaCookiescookies an'ny antoko voalohanypossible izaofitsipikacookies tsy misy antoko
Eric Tejeda no Talen'ny Marketing Azo ataoNOW. Eric dia mitarika ny tanjon'ny fitomboan'ny fikambanana amin'ny alàlan'ny famoahana vokatra sy serivisy vaovao, fampiroboroboana ny fitarihana eritreritra, fananganana fahatsiarovan-tena amin'ny marika ary fitarihana fitarihana. Eric dia nametraka andiana teknolojia ara-barotra izay manome voninahitra ny fanirian'ny mpanjifa, manome fampahalalana manan-danja ary manorina fahatokisana. Raha mila fanazavana fanampiny tsidiho www.possiblenow.com.
Fomba 6 hiaraha-miasa amin'ireo influencer tsy misy sponsorship